आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण, कुन प्रदेशबाट कतिखेर देखिन्छ सूर्यग्रहण ?
काठमाडौँ, ७ असार । आज असार ७ गते आइतबार आषाढ कृष्ण औँसीका दिन खण्डग्रास (आधा सूर्य ढाक्ने) सूर्यग्रहण लाग्ने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ । ग्रहणले बिहान १०ः५० बजे स्पर्श गर्ने छ । मध्याह्न १२ः३८ बजे मध्य र अपराह्न २ः२३ बजे ग्रहणले मोक्ष प्राप्त गर्ने समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो […]
वास्तुशास्त्र अनुसार कुन दिशामा पानी राख्दा शुभ हुन्छ ?
वास्तुशास्त्र अनुसार कुन दिशामा पानी राख्दा शुभ हुन्छ ? वास्तुशास्त्रमा भौतिक विकास निर्माणका बारेमा चर्चा गरिएको छ । स्थापत्य वेद भनेको आजको वास्तुशास्त्र हो । यसमा नगर तथा भवन निर्माणका नियम, विधि र प्रक्रियाहरुको व्याख्या छ । उद्योग, नहर, कुवा, इनार, मन्दिर, घर, अफिस, बजार आदिको निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको वर्णन वास्तुशास्त्रमा गरिएको हुन्छ […]
वास्तुशास्त्र अनुसार यी कामहरु गरेमा मिल्नेछ सफलता । वास्तुशास्त्रमा भौतिक विकास निर्माणका बारेमा चर्चा गरिएको छ । स्थापत्य वेदमा यस सम्वन्धी धेरै कुराहरुको वर्णन गरिएको पाइन्छ । स्थापत्य वेद भनेको आजको वास्तुशास्त्र हो । यसमा नगर तथा भवन निर्माणका नियम, विधि र प्रक्रियाहरुको व्याख्या छ । आज स्थापत्य शास्त्र एक कला र विज्ञानको रुपमा विकसित […]
घरको गेट बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने ७ कुराहरु ! घर बनाउँदा वास्तु दृष्टिका विभिन्न कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । घरमा रहेका कुराहरुले सकारात्मक र नकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने हुँदा यस्ता कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । वास्तुशास्त्रः एक चिम्टी नुनले तपाइँलाई धनी बनाउन सक्छ । घरको मुख्य गेट बनाउँदा सँधै ७ कुराको ध्यान दिनुपर्ने वास्तुशास्त्रको भनाइ छ । यी […]
वास्तशास्त्र प्राचीन विज्ञान हो । वास्तुको अर्थ हुन्छ आवासगृह अर्थात् घर र शास्त्रको अर्थ हुन्छ अनुशासन र निर्देश । यसर्थ वास्तुशास्त्र भन्नाले घर वा कुनै संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्देशलाई बुझिन्छ । वास्तुशास्त्रलाई हिन्दु शास्त्र र आधुनिक विज्ञानले पनि विश्वासिलो आधार मान्ने गर्छ । वास्तुशास्त्रलाई आधुनिक समयको विज्ञान र आर्किटेक्चरको प्राचीन स्वरुप मान्न […]
वास्तुशास्त्रमा भौतिक विकास निर्माणका बारेमा चर्चा गरिएको छ । स्थापत्य वेदमा यस सम्वन्धी धेरै कुराहरुको वर्णन गरिएको पाइन्छ । स्थापत्य वेद भनेको आजको वास्तुशास्त्र हो । यसमा नगर तथा भवन निर्माणका नियम, विधि र प्रक्रियाहरुको व्याख्या छ । आज स्थापत्य शास्त्र एक कला र विज्ञानको रुपमा विकसित भइसकेको छ । इञ्जिनीयरिंग र आकीटेक्ट लगायतका क्षेत्रमा […]
वास्तशास्त्र प्राचीन विज्ञान हो। वास्तुको अर्थ हुन्छ आवासगृह अर्थात् घर र शास्त्रको अर्थ हुन्छ अनुशासन र निर्देश । यसर्थ वास्तुशास्त्र भन्नाले घर वा कुनै संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको निर्देशलाई बुझिन्छ । वास्तुशास्त्रलाई हिन्दु शास्त्र र आधुनिक विज्ञानले पनि विश्वासिलो आधार मान्ने गर्छ । वास्तुशास्त्रलाई आधुनिक समयको विज्ञान र आर्किटेक्चरको प्राचीन स्वरुप मान्न सकिन्छ […]
वास्तुशास्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने पाँच तत्वहरू जल, वायु, अग्नी, धर्ती, आकाश मिलेर सारा ब्रह्माण्ड बनेको हुन्छ । यसलाई ‘पञ्चभूत’ पनि भनिन्छ । मानवलगायत अन्य जीवित प्राणीहरू पनि यहि पाँच तत्वको समन्वयबाट बनेको हुन्छ। त्यसैले त प्राणी र प्रकृतिको सम्बन्ध यति प्रगाढ हुन्छ । पृथ्वीको कुनै निश्चित दिशा र निश्चित वस्तु वा कुनै व्यक्तिको एउटा विशेष […]
घरमा पलंग वा खाट केवल सुत्ने बस्तुको रुपमा बुझ्न नहुने बास्त्रु शास्त्रीहरु बताउँछन् । पलंगले सकारात्मक र नकारात्मक उर्जा पैदा गर्ने भएका कारण यसलाई राख्दा देखि अन्य प्रयोगमा पनि ख्याल गर्नु पर्ने बास्तुबिदहरुको भनाइ छ । घरको गलत दिशामा पलंग राखेमा मान्छेलाई निद्रा नलाग्ने देखि तनाव हुने सम्मका समस्या हुने समेत बास्तु शास्त्रमा उल्लेख छ […]
घरमा शान्ति कायम गर्ने ६ कुराहरु थाहा पाइ राख्नुहोस्
घर भनेको मन्दिर हो जहाँ हामीलाई सुख, आनन्द र सम्वृद्धिको अनुभूति मिल्छ । शान्ति मनुस्य जातिको नैसर्गिक अधिकार हो जसलाई कायम गर्न हामीले कसरत पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । अक्सर आफ्नो घरमा शान्ति कायम गर्न हामी चुकीरहेका पनि हुनसक्छौं । यहाँ ६ तरिका दिइएको छ जसले गर्दा आफ्नो घरमा शान्ति भित्राउन सकिन्छ । १. जुत्ता चप्पल […]